Xaqiiqda Isbadelka Cimilada ee Florida Condo Collapse waxay dhalisaa Khatar Xeebaha Miami, Dalxiiska, iyo Milyaneerada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Xaqiiqda Isbadelka Cimilada ee Florida Condo Collapse waxay dhalisaa Khatar Xeebaha Miami, Dalxiiska, iyo Milyaneerada
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Hoteelada & Dalxiisyada • LGBTQ • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Wetland waxay sababi kartaa burburka dhismaha. Meelaha nugul ee Koonfurta Miami Beach
Barta dalxiiska casriga ah iyo hoyga milyaneerada ee gobolka xeebta Miami ayaa qarka u saaran inay burburto. Daraasadda Dr. Shimon Wdowinski waxay diiradda saartay horumarinta iyo adeegsiga farsamooyinka geodetiga ee bannaan oo si hufan u ogaan kara dhaqdhaqaaqyada yaryar ee dusha sare ee Dhulka. Wuxuu u sheegay Daily Mail ee London, inuu isla markiiba ogaa waxa dhisme dumay oo dad badan ku dilay Seaside, Florida.
Isbedelka Cimilada iyo kor u kaca Badweynta ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay burburka dhismaha Florida Champlain Tower Condo iyadoo suuragal ay tahay in wax badan la raaco.
FProfessorka Jaamacadda Caalamiga ah ee lorida Shimon Wdowinski wuxuu sheegay inuu isla markiiba ogaa dhisme dumay markii uu maqlay warbixinnada dhismaha Seaside Champlain Tower South Condo ee ku yaal Florida.
Saddex dhismeyaal kale oo hudheel iyo guryo dabaq ah ayaa si deg deg ah u degaaya Surfside, Park View Island, iyo South Miami Beach oo ku yaal xaafadda Flamingo.
Jaamacadda caalamiga ah ee Florida Dr. Shimon Wdowinski wuxuu bartay warbixintii dhismaha ee la daabacay sanadkii hore oo ay kujireen Tawershii Champlain ee Surfside Florida. Wuxuu fahansan yahay sababta dhismayaasha ku yaal Miami, Florida ee laga dhisay dhul qoyan ay hadda u quusanayaan.
Khatarta ah in la waayo xeebaha ayaa dad badan ka digtay halista isbedelka cimilada. Gaar ahaan dhulka qoyan - oo awood u leh inay ka ilaaliyaan magaalooyinka xeebta daadadka iyo duufaannada, iyo kala-soocidda wasakhda - waxay bixiyaan difaacyo lumin kara mustaqbalka
Daraasadda ayaa lagu sheegay in dhismaha 'Champlain Tower Condo' uu hoos u dhacayay qiyaastii ilaa 2 milimitir sanadkii sanadkii 1990-meeyadii maxaa yeelay wuxuu ku fadhiyaa dhul-qoyano la soo ceshay.
Isla warbixinta ayaa tilmaamtay saddex goobood oo kale ayaa si deg deg ah u degay - mid kalena Surfside, oo ku taal Park View Island halkaas oo ay ku yaallo guryo iyo dugsi hoose oo u dhow, iyo laba ku yaal koonfurta Miami Beach oo ku taal xaafadda Flamingo.
Tani waxay noqon kartaa bilowga wax badan oo soo socda oo loogu talagalay xaafaddan casriga ah, iyo warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Koonfurta Florida.
The Dhismaha Champlain Tower Condo ee ku yaal Surfside burburay seddex maalmood ka hor waxaana suuragal ah inay dileen boqol ama in ka badan oo qof oo hadda la soo sheegayo in lagu la’yahay burburka.
Xeebta Miami ee ku taal Wetland
Isbedelka cimilada ayaa dhab ah.
Dr. Shimon Wdowinski wuxuu BSc ka qaatay cilmiga sayniska dhulka (1983) iyo MSc ee cilmiga geology (1985) oo uu ka qaatay jaamacada Hebrew (Jerusalem, Israel) iyo MS ee cilmiga injineernimada (1987), iyo Ph.D. oo ku saabsan cilmiga dhulka (1990) oo ka socda Jaamacadda Harvard. Wuxuu ku qaatay daraasado dhakhtarnimo kadib Scripps Institution of Oceanography (1990-1993); wuxuu muddo hal sano ah ka shaqeynayey sahaminta cilmiga dhulka ee Israa’iil (1993-1994); wuxuu toban sano ka ahaa macallin ka ahaa Waaxda Juquraafiyada iyo Cilmiga Planetary, Jaamacadda Tel Aviv, markii ugu horreysayna wuxuu ahaa bare (kaaliyaha borofisar, 1994-1998) ka dibna wuxuu ahaa macallin sare oo kireysan (ku-xigeen borofisar, 1998-2004); oo wuxuu toban sano kale ka shaqeeyey Waaxda Cilmiga Badda ee Jaamacadda, Jaamacadda Miami, markii ugu horreysayna wuxuu ahaa borofisar cilmi-baare (2005-2016) ka dibna wuxuu ahaa borofisar cilmi-baaris (2015-2016). Wuxuu ku biiray Waaxda Dunida iyo Deegaanka, Jaamacadda Caalamiga ah ee Florida, sanadkii 2016 isagoo ah borofisar ku takhasusay kireysiga.
Aagagga Cilmi baarista
Daraasadda Dr. Shimon Wdowinski waxay diiradda saartay horumarinta iyo adeegsiga farsamooyinka geodetiga ee bannaan oo si hufan u ogaan kara dhaqdhaqaaqyada yaryar ee dusha sare ee Dhulka. Wuxuu si guul leh u adeegsaday farsamooyinkan si uu u barto dhaqdhaqaaqa saxanka tectonic, dhulgariirrada, kaalmada dhulka, howlaha godadka, biyo-qoynta, isbeddelka cimilada, iyo kor u kaca heerka badda.